ဝါးခယ်မ : စိတ်​မိုက်​တို့၏ ချုပ်ငြိမ်းရာ - ကိုနန္ဒ(ဝါးခယ်​မ)​
စိတ်​မိုက်​တို့၏ ချုပ်ငြိမ်းရာ - ကိုနန္ဒ(ဝါးခယ်​မ)​
အုန်းပင်​စုရွာသည်​ ဧရာဝတီတိုင်းရှိ ပင်​လယ်​ပြင်​နှင့်​အနီးကပ်​ဆုံး ကမ်း​ခြေတံငါရွာလေးဖြစ်​သည်​။ရွာ၌ အိမ်​​ခြေ​လေးရာခန့်​ရှိပြီး အများစုသည်​​ရေလုပ်​ငန်းဖြစ်​​သော တံငါအလုပ်​ကိုသာအဓိကထားလုပ်​ကိုင်​ကြသည်​။မိုးရာသီကုန်​၍ပွင့်​လင်းရာသီသို့​ရောက်​ပြီဆိုလျှင်​ ကမ်း​ခြေသဲ​သောင်​ပြင်​၌ ငါး​ခြောက်​လှမ်း​သောစင်​များဖြင့်​ပြည့်​လျက်​ရှိသည်​။ အုန်းပင်စုဆိုသည့်အမည်နာမအတိုင်း ထိုရွာ၌ များပြားလှသော အုန်းပင်တို့က စီတန်းကာပေါက်ရောက်နေကြသည်။ ပင်​လယ်​ကမ်း​ခြေတ​လျှောက်​ အုန်းပင်​စုရွာကဲ့သို့ပင်​ ရွာတန်းရှည် လေးငါးရွာရှိသည်။ ထိုရွာတို့သည်လည်း တံငါရွာများပင်ဖြစ်သည်။
နေဝင်ရီတရောအချိန်လည်းဖြစ်ပြီမို့ တံငါ​လှေအစုစုတို့သည်​လည်း အလုပ်သိမ်းမည့်အတွက် ကမ်း​ခြေသို့ပြန်​လာ​နေကြသည်။ငါးဖမ်း​လှေငယ်​များကို ​သောင်​ပြင်​ကမ်းစပ်​တွင်​ထားရှိကြပြီး တစ်​​နေ့တာလုပ်​ငန်းကို လက်​စသပ်​ချိန်​လည်းဖြစ်​သည်​။
တံငါသည်တစ်ဦးဖြစ်သော ကိုအုန်းထွန်းသည် ပုခုံးထက်​မှ ​ကျောက်​ဆူးကို သဲ​သောင်​ပြင်​​ပေါ်သို့ ပစ်​ချပြီး သူ၏ညာ​ခြေ​ထောက်​ဖြင့်​ဖိနင်းကာထိုးစိုက်​လိုက်သည်​။ကျွတ်​ထွက်​၊ပြုတ်​မထွက်​သွားရ​အောင်​ ဂရုတစိုက်လုပ်ကိုင်ပြီးနောက် ပင်​လယ်​ကမ်းစပ်​ရှိ​သူ၏လှေသို့ ပြန်​သွားသည်​။​ထို့နောက် တစ်နေ့တာလုံးဖမ်းဆီးထားသော ငါးတောင်းကိုထမ်းကာ သူ၏အိမ်သို့ပြန်သည်။ ။လက်​တစ်​ဖက်​က ဓာတ်​မီးကိုကိုင်​ထားသည်​။ဓာတ်မီးကမကိုင်​၍လည်းမဖြစ်​ပါ။ရွာလမ်းမရှိ ဖုံများ ၊သဲများတွင် မြွေ​ပွေး​ကောင်​များက ဖုံလူး၍ငြိမ်​သတ်​​နေတက်ကြသည်။ လမ်းသွားလမ်းလာများက မမြင်​၍တက်​နင်းမိ​သောအခါ ပြန်​လည်​ကိုက်​ခဲတက်​သည်​။အဆိပ်​ပြင်းလွန်း​သော​ကြောင့်​ အကိုက်​ခံရသူတိုင်း ဆေးရုံ ဆေးခန်းသို့မရောက်မီ ကွယ်လွန်သူကများသည်။ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိသော်လည်း ဆေးဝါးစုံလင်မှုက မရှိ။
သို့ပါ​သော​ကြောင့်​ ​နေဝင်​၍ည​မှောင်​ပြီဆိုလျင်​ဖြင့်​ ရွာသားတိုင်း ဓာတ်​မီးမပါဘဲ ဘယ်​ကိုမှ မသွားမလာဝံ့ကြ။
ကိုအုန်းထွန်း သူ၏အိမ်​ခြံဝန်း​ရှေ့​ရောက်​သည်​နှင့်​ ဇနီးသည်​က အ​ပြေးကြိုကာ ပုခုံး​ပေါ်က ငါး​တောင်းကိုကူမသည်​။အိမ်​​ရှေ့ ကွပ်​ပျစ်​​ပေါ်သို့ငါး​တောင်းကို ချပြီး​နောက်​...​
အဆီပြန်​မျက်​နှာ​ပေါ်ရှိ​ချွေးတို့ကို သူသုတ်ဖယ်ပြီးသည်နှင့် မီးလင်းလျက်​ရှိ​သော ဓာတ်​မီးကိုပိတ်​သည်။ စတီး​သောက်​​ရေခွက်​ကိုင်​ပြီး သူ့ဆီလာ​နေ​သော သားအငယ်​​ကောင်​ကို ကြည့်​ကာ
"အငယ်​​ကောင်​ မင်းအစ်​မ​ရော မ​တွေ့ပါလားကွ၊ဘယ်​သွား​နေလဲ"
"မိုးမချုပ်​ခင်​​လေးက​တော့ ​တွေ့တယ်​ အဖေ..။ဒီ​နေ့ ​ကျောင်းလည်းပိတ်​ ၊ကျူရှင်းလည်းပိတ်​တော့
အခု ဘယ်​အိမ်​ကိုအလည်​သွား​နေလဲ မသိဘူး၊
အိမ်​မှာ​တော့ မရှိဘူး အ​ဖေ"
"​အေး.. ​အေး. .မင်းအစ်​မက အရွယ်​​ရောက်​လာပြီ ဆို​တော့
ရွာရိုးတကာလှည့်​ပြီး လင်​ရှာထွက်​​နေမှာ​ပေါ့" စကား​ပြောလျင်​ ပိဿ​လေး​ဘေးပစ်​​ပြောတက်​​သော​ကြောင့်​ ကိုအုန်းထွန်းအား ဇနီးနှင့်​သားသမီးများက အထွန့်​တက်​၍ စကားမ​ပြောဆိုဝံ့ကြ။ စိတ်မထင်လျှင် မထင်သလို ဓားဆွဲ၊တုတ်ဆွဲကာ ခုတ်ဖို့ထစ်ဖို့တာဆူသည့် အကျင့်ဆိုးကလည်းရှိသည်။ စိတ်​ကောင်း၊ စေတနာ​ကောင်းရှိသော်လည်း မိမိစိတ်​တိုင်းမကျ ၊မြင်​​တွေ့သမျှပုံစံမကျလျှင်​လည်း ဒိုးဒိုး​ဒေါက်​​ဒေါက်​ ​ပြောတက်​သည်​။လူ​ဖြောင့်​စိတ်​တိုမို့ မျက်​နှာကလည်း အပြုံးအရယ်​နည်းလှသည်။
ကိုအုန်းထွန်း၌ သားသမီးနှစ်ဦးသာရှိသည်။ သမီးဖြစ်သူက ဆယ်တန်းကျောင်းသူ ၊သားဖြစ်သူ အငယ်ကောင်က ခြောက်တန်းကျောင်းသား။
သားဖြစ်​သူ ကမ်း​ပေးလာ​သော ​သောက်​​ရေကို တစ်​ကျိုက်​တည်းဖြင့်​ ကိုအုန်းထွန်း အကုန်​​သောက်သည်။
"မနက်​ဖြန်​တစ်​ရက်​​တော့ ငါ အိမ်​မှာနားဦးမယ်​ကွာ။
ဒီ​နေ့ ငါဖမ်းပိုက်​​တွေ ကွဲပြဲလာ​လို့ ပြန်​ဖာရဦးမယ်​။
မနက်​ကြရင်​ ​လှေထဲကပိုက်​​တွေကို အိမ်​ကိုယူလာ​ပေး"
သားငယ်​ဖြစ်​သူနှင့်​ ဇနီးဖြစ်​သူက ကိုအုန်းထွန်းစကားကို ​ခေါင်းညိတ်​ပြပြီး မည်​သည့်​စကားတစ်​ခွန်းမျှမဟ။ပြီး​နောက်​ မခင်​မြမှာ​
ငါးအမျိုးအစားများကို ခွဲခြားပြီး ​ရေခဲပုံးထဲသို့ထည့်​သည်​။ထိုသို့အမျိုးအစားခွဲပြီးသည်​နှင့်​​ ငါးအဝယ်​ဒိုင်​သို့သွင်းရန်​အတွက်​ အိမ်​အပြင်​သို့ထွက်​သွား​လေသည်။
ကိုအုန်းထွန်း တစ်ယောက် နံနက်အတော်ပင်နေမြင့်မှ အိပ်ယာနိုးထလာသည်။ သူ အိပ်​ယာနိုး၍အိပ်​ခန်းမှအထွက်​၌ ​တွေ့လိုက်​ရ​သောမြင်​ကွင်း​ကြောင့်​ ​ဒေါသများဆူ​ဝေသွားသည်​။အိမ်​​ဧည့်​ခန်းတွင်​ ညစ်​​ပေ​နေ​သော​ခြေရာများက မြင်​ရက်​စရာမရှိ​အောင်​ ​ပေပွ​နေသည်ကို သူမြင်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ဒီမှာ ဘယ်​မသာရဲ့ ခွာရာ​တွေတုန်းဟ၊
မသုတ်​ပဲ ဘယ်​​ခွေး​တိရစ္ဆာန်​​တွေ တက်​သွားတာလဲ"
ခင်​ပွန်းဖြစ်​သူ၏ ​ဒေါသတကြီးစကားသံကျယ်​ကျယ်​ကိုကြားရ​သော​ကြောင့်​ မခင်​မြက မီးဖို​ချောင်​ထဲမှ အ​ပြေး​လေးထွက်​လာသည်​။ပြီး​နောက်​..ကိုအုန်းထွန်း ညွှန်​ပြရာ​နေရာသို့ မခင်​မြကြည့်​မိသည်​နှင့်​..
အဲ့တာ..မနက်​က အိမ်​ကို ထိုင်​ဆွမ်းကြွလာတဲ့
ကျွန်​မ ​နောက်​​ဖေးမှာ မအား​သေးလို့
ပါးစပ်​က​ပြောလည်း​ပြောပြီး မခင်​မြမှာ အခန်း​ဒေါင့့်ရှိအဝတ်​ကိုယူ၍သန့်​ရှင်း​ရေးလုပ်​လိုက်​သည်​။ကိုအုန်းထွန်းလည်း သူ၏အထင်​မှားမှုကို​တွေးပြီးပြုံးလိုက်သည်​။နုတ်​ဖျားကလည်း..ကန်​​တော့..ကန်​​တော့ဟုတီးတိုး​ရေရွတ်​သေးသည်။
ကိုအုန်းထွန်းသည် ​ရေမိုးချိုးပြီး၊ထမင်းစားပြီးသည်​နှင့်​ အိမ်​​ရှေ့၌ ငါးဖမ်းပိုက်​အကွဲများကို ထိုင်​ဖာသည်​။ငါဖမ်းပိုက်​တွင်​လိုအပ်​မည့်​ ခဲသီး၊​ဖော့သီးများကိုလည်း ပြန်​လည်​တပ်ဆင်သည်။ အချိန်​နှစ်​နာရီခန့်သာကြာပြီး​နောက်​ သူ၏ပိုက်​ဖာမှုလဲပြီးဆုံးသွားသည်။
ညနေထမင်းစားပြီးသည်နှင့် ကိုအုန်းထွန်းတစ်ယောက် ရွာထဲသို့ လမ်းလျှောက်ထွက်လေသည်။
ရာအိမ်မှူးဖြစ်သူက သူ့ကိုမြင်တွေ့သည်နှင့် လောကွတ်စကားဆိုသည်။
"ဒီ​နေ့ တစ်​ရက်​​တော့ နားတယ်​ဗျာ။
​တွေဆို​တော့ ငါးသား ဖားသား အရပြုနည်းတယ်​ဗျ´
ကိုအုန်းထွန်းမှာ ​ရေလုပ်​သား တံငါသည်​မို့အိမ်​၌​နေရသည်​က မရှိ။ငါး​ပေါ်ရက်​များဆိုလျှင်​ ကိုအုန်းထွန်းသည် သုံး​လေးရက်​အိမ်​သို့ပြန်​မလာနိင်​။အိမ်​ပြန်​လာပြန်တော့လည်း ညအိပ်​ချိန်​​၊အနားယူချိန်​​လေးခဏသာ။ သူသည် အတန်းပညာလည်းမတက်​၊ငါဖမ်းအလုပ်​မှလွဲ၍ မည်​သည့်​စီးပွား​ရေးကိုမှ မလုပ်​တက်​​သော​ကြောင့်​လည်း မိရိုးဖလာ တံငါအလုပ်​ကိုသာတစ်​စိုက်​မတ်​မတ်​လုပ်​ကိုင်​​နေခြင်းလည်းဖြစ်​သည်​။ရှိစုမဲ့စု ​ငွေ​ကြေးတစ်​ချို့နှင့်​ငါးအဝယ်​ဒိုင်​​လေးဖွင့်​ဖို့ကို သူစိတ်​ကူးခဲ့ဖူးသည်။ သို့သော် သူ့လို​ပြော​ပေါက်​မျိုးနှင့် စီးပွား​ရေးမဖြစ်​နိင်​ဘူးဟု မခင်​မြက​ပြောထား​သောကြောင့်​အ​ကောင်​အထည်​မ​ဖော်​ဖြစ်​ခဲ့ပါ။
ရာအိမ်​မှူးဖြစ်​သူက ဖိတ်​​ခေါ်​သော​ကြောင့်​ ကိုအုန်းထွန်းလည်း ခေါင်းညိတ်လက်ခံလိုက်သည်။
တစ်​​နေ့ တစ်​​နေ့ ပင်​လယ်​ထွက်​လိုက်​၊ညဆို အိမ်​ပြန်​အိပ်​လိုက်​နဲ့ဆို​တော့
ရွာရဲ့ အ​ခြေအ​နေကိုလဲ ဘာမှမသိရပါဘူးဗျာ"
ကုလားထိုင်​တစ်​ခု​ပေါ်ထိုင်​ရင်း အိတ်​ကပ်​ထဲမှ​ဆေး​ပေါ့လိပ်​ကိုသူထုတ်​သည်​။​အစီခံကိုလက်​သဲဖြင့်​ ကုတ်​ခြစ်​နေစဉ် ရာအိမ်မှူးက စကားစလာသည်။
"လာမယ့်​ တ​ပေါင်းလ ရွာဘုရားပွဲအတွက်​ဆရာ​တော်​က ကျွန်​​တော်​တို့ကို အစည်း​ဝေး
ကျွန်​​တော်​တို့လည်း ဘာမှမလုပ်​တက်​ဘူးဖြစ်​​နေတယ်​၊သူပြန်​လာမှ ဘုရားပွဲအတွက်​
ရာအိမ်​မှူးက စကားလည်း​ပြောရင်း ဓာတ်​ဗူးထဲမှ အ​ငွေ့တ​ထောင်း​ထောင်းထ​နေ​သော ​ရေ​နွေးများကို ခရားထဲသို့ထည့်​ပြီး လ္ဘက်​​ခြောက်​ကိုခပ်​သည်​။လက်​ဖက်​ရည်​ကြမ်း၊လက်​ဖက်​၊ငါး​ခြောက်​ဖုတ်​များနှင့်​ ကိုအုန်းထွန်းကို တရိုတ​သေဧည့်​ခံသည်။
ရမ်းကားတယ်​၊တဖက်​ကလည်း ​ကျေ​အေးမ​ပေးနိင်​​တော့..တစ်​ခါတစ်​​လေ ရပ်ကွက်မှာ
ညအချိန်​မ​တော်​ အုန်းမယ်​တို့ဆိုင်​ကိုအရက်​ထမ​ရောင်းလို့ပြဿနာရှာတာက စတာပဲ"
ကိုအုန်းထွန်းက ​ရေ​နွေးကြမ်းတစ်​ခွက်​ကို​သောက်​ရင်း ရာအိမ်​မှူးကို​ခေါင်းညိတ်​ပြသည်​။
​ပေတလူက ရွာတွင်​ခပ်​ဆိုးဆိုး၊ခပ်​​ပေ​ပေ။ဖဲဝိုင်း၊ကြက်​ဝိုင်း၊အရက်​ဝိုင်း ​နေရာစုံသူကအမြဲပါသည်​။မိဘက​ငွေ​ကြေးပြည့်​စုံပြီး ရိုးရိုးကုပ်​ကုပ်​​နေထိုင်​တက်​​သော်​လည်း တစ်​ဦးတည်း​သောသားဖြစ်​သူ ​ပေတလူကရိုင်းစိုင်းသည်​။​ကျောင်း​နေစဉ်​ကလည်း အတန်းပိုင်​ဆရာမကို လက်​ဆွဲပြီးရည်းစားစကား​ပြောခြင်း၊ကာအိ​နြေ္ဒပျက်​ပြား​အောင်​ပြုလုပ်​ခြင်းတို့​ကြောင့်​ ရာသက်​ပန်​​ကျောင်းထုတ်​ခြင်းကိုခံခဲ့ရသူလည်းဖြစ်​ပြန်​​သေးသည်​။
"အချိန်​မ​တော်​ကြီးဆို​တော့လည်း အုန်းမယ်​ကဘယ်​ထ​ရောင်းမလဲ၊မ​ရောင်းရ​ကောင်းလားဆိုပြီး​တော့ ​ပေတလူကဆိုင်​ကို ညတွင်းချင်း
ဖျက်​ဆီးလိုက်​တာ ဆိုင်​တစ်​ခြမ်းပြိုပါ​လေ​ရောဗျာ၊ မိဘဖြစ်​သူ ကို​သောင်းလှကလည်း ဘယ်​လိုမှ ​ပြောမရ၊
ဆုံးမ မရတဲ့ သားဖြစ်​သူ ​ပေတလူ​ကြောင့်​တစ်​ရက်​မှ စိတ်​မ​အေးကြရပါဘူးဗျာ"
သွားချင်းကြိတ်​ပြီး​ မေး​ကြောများ​ထောင်​ထသည်​အထိထိုစကားရပ်​ကို ကိုအုန်းထွန်း​ပြောခြင်းဖြစ်​သည်​။
ဘတ္ထရီမီး​ချောင်းမှ အလင်းကစူးရှ၍ လင်းကျင်းလွန်း​နေပါသည်​။ထိုမီး​ချောင်းနှင့်​ အနီးဆုံး​နေရာရှိ ခုံ​တန်းပေါ်တွင်​ သမီးဖြစ်​သူ ကျူရှင်​မှ ပြန်​အလာကို ကိုအုန်းထွန်းနှင့်​မခင်​မြက ထိုင်​​စောင့်​​နေကြသည်​။ထိုသို့​စောင့်​ရင်း ​ထွေရာ​လေးပါး စကားတို့​ပြော​နေကြစဉ်​ အိမ်​ခြံဝန်းအပြင်​ဖက်​ဆီမှ အသံကျယ်​ကျယ်​​လောင်​​လောင်​ဖြင့်​ ရန်​​တွေ့သံကို သူတို့လင်မယားကြားလိုက်ရသည်။ ထိုအသံသည်​ကား ကိုအုန်းထွန်း သမီး၏ ​ဒေါသသံ ၊မ​ကျေမနပ်​ဖြစ်​ပြီး ရှက်​သည့်​ စိတ်​တို့​ရောပြွန်းထားသည့်​ စကားသံဖြစ်သည်။
"နင်​..ငါ့အိမ်​နားအထိ ​ရှေ့ဆက်​မတိုးလာနဲ့​နော်​၊နင့်​ လို​ကောင်​မျိုးကို ​သေ​တောင်​မစဉ်းစားဘူး"
ကိုအုန်းထွန်းက ထိုအသံကြားသည်​နှင့်​ ထိုင်​ရာမှထကာ ​ပြေးထွက်​သည်။
သူ၏ နုတ်​ဖျားမှလည်း အိမ်​အပြင်​မှ ကြား​အောင်​အသံကိုမြှင့်​လျက်​...
"အ​ဖေ နဲ့ အ​မေ ဒီမှာ သမီးကို ​ပေတလူဆွဲလား၊ရမ်းလား လုပ်​ပြီး ​စော်​ကား​နေတယ်​"
ကိုအုန်းထွန်းလည်း အိမ်​ခြံဝ​ရောက်​ပြီးကာမှ အ​နောက်​သို့ပြန်​လှည့်​ကာ အိမ်​​ခေါင်းရင်း၌ချိတ်​ထား​သော ငှက်​ကြီး​တောင်​ဓားကို သွား​ပြေးယူသည်​။တိတ်​ဆိတ်​လျက်​ရှိ​သော ပါတ်​ဝန်းကျင်​က ရုတ်​ချည်းဆူညံကာ
အုန်းအုန်းကျွတ်​ကျွတ်​ဖြစ်​သွားသည်​။မခင်​မြကလည်း ​ဘေးအိမ်​များကို အကူအညီလှမ်း​တောင်းခြင်း​ကြောင့်​ ရွာသားတစ်​ချို့ထွက်​လာကြသည်​။
​ပေတလူက ရွာထဲမှရွာပြင်​ရှိ​သောင်​ပြင်​​ကမ်းနားဖက်​သို့​ပြေး၏။ကိုအုန်းထွန်းလည်း ​ပေတလူ​နောက်​သို့ သဲကြီးမဲကြီးဖြင့်​ ထပ်​ချပ်​မကွာလိုက်​​လေသည်​။
"​ဟေ့​ကောင်​..​ခွေးသူ​တောင်းစားမင်း ငါ့လက်​က လွတ်​​အောင်​​ပြေးထား၊
​ပေတလူက ​နောက်​သို့လှည့်​မကြည့်​ပဲကမ်း​ခြေသဲပြင်​မွမွ​ပေါ်တွင်​ အားသွန်​​ပြေး​နေသည်။ ည၏လ​ရောင်​ ခပ်​ပါးပါး​လေးကကမ်း​ခြေသို့ကျ​ရောက်​​နေသည်။ တစ်​ဦးနဲ့တစ်​ဦးကလှမ်းကြည့်​လျင်​မြင်​​နေရသည်​မို့​ပြေးသူနှင့်​ လိုက်​သူသည်​ ထပ်​ချပ်​မကွာရှိလှသည်​။​ပေတလူက မူး​နေ​သော်​လည်းသတိရှိလှသည်​။လူငယ်​တစ်​ဦး​မို့လည်း ​ပြေးအားကမကျ။ကိုအုန်းထွန်းကလည်း ​ဇောဖြင့်​ ​ရေကုန်​​ရေခမ်း အမှီလိုက်​​နေသည်​။ငှက်​ကြီး​တောင်​ဓားကိုလည်း ပြုတ်​မကျ​အောင်​ ညာဖက်​လက်​ဖြင့်​ ကျစ်​ကျစ်​ပါ​အောင်​ဆုပ်​ကိုင်ထား၏။
​ပေတလူက စူးစူးဝါးဝါး ​အော်​သံနဲ့အတူ သဲပြင်​​ပေါ်သို့လဲကျသွားသည်​။သဲ​တောထဲရှိ ​မြွေ​ပွေးတစ်​​ကောင်​၏ ကိုက်​ခဲမှုကိုခံလိုက်​ရ​သော​ကြောင့်​ လဲကျသွားခြင်းရယ်​ပါ။
ကိုအုန်းထွန်းကလည်း ​ပေတလူကို မှီသွားပြီမို့ ငှက်​ကြီး​တောင်​ဓားကို ​မြှောက်​လျက်​ခုတ်​မည်​ပြုသည်။ထိုစဉ်....
"မလုပ်​နဲ့..မလုပ်​နဲ့ ကိုအုန်းထွန်း၊ခင်​ဗျား မှားမယ်​"
ကိုအုန်းထွန်းနှင့်​ ​ပေတလူ​နောက်​သို့ လိုက်​လာ​သော ရွာသားများထဲမှ ရွာသားတစ်ဦးက တားမြစ်​ခြင်းဖြစ်သည်။ မီးအိမ်​များ၊ဓာတ်​မီးများဖြင့်​ ထို​နေရာ​လေးတစ်​ဝိုက်​က လင်းသွားသည်​။ရွာသားတစ်​ဦးက ကိုအုန်းထွန်း၏ ဓားကိုဆွဲယူသည်​။
"​ဒေါသ​တွေ ​ဖြေလိုက်​ပါဗျာ၊ခင်​ဗျားသူ့ကို သတ်​စရာမလိုပါဘူး
​ပေတလူလည်း မည်​သည့်​​ဆေးရုံ​ဆေးခန်းမှမ​ရောက်​။အဆိပ်​ပြင်းလှ​သော ​မြွေဆိပ်​​ကြောင့်​ပင်​ နာရီပိုင်းအတွင်း၌ သေဆုံးသွားရသည်။
​ပေတလူ၏ နာ​ရေးရက်​လည်​ပြီး​နောက်​တစ်​​နေ့၌ဖြစ်​သည်​။ကိုအုန်းထွန်းအိမ်​သို့ ရွာမှ ​ကျောင်းထိုင်​ဆရာ​တော်​ကြီးနှင့်​အတူ ကို​သောင်းလှတို့ လင်​မယားနှစ်​ဦးတို့လည်း ကြွ​ရောက်​လာကြသည်​။
"ဖြစ်​ခဲ့သမျှကိစ္စ​တွေအတွက်​ ကျွန်​​တော်​ ​တောင်းပန်​ပါတယ်​ဗျာ၊
ကို​သောင်းလှက ကိုအုန်းထွန်းကို ​တောင်းပန်​စကားဆိုသည်​။ဆရာ​တော်​ကြီးကလည်း ကိုအုန်းထွန်းနှင့်​ ကှို​သောင်းလှကိုကြည့်​ပြီး တရားသ​ဘောဖြင့်​ ​လူလေ့ာကကြီးတွင်​ကျင့်​ကြံရမည့်​ လူမှု့ကျင့်​ဝတ်​တရားများကိုဟောပြောသည်။
"မျက်​လုံးတစ်​လုံးအတွက်​ မျက်​လုံးတစ်​လုံး ပြန်​​ပေးရမယ်​ဆိုရင်​
အားနည်းတဲ့သူ​တွေက တစ်​ချိန်​အစွမ်းရှိလာတဲ့အခါမှာ ခွင့်​လွှတ်​တယ်​၊ခွင့်​မလွှတ်​ဘူးဆိုတာ
ဒကာကြီးတို့​တွေရဲ့သ​ဘောပဲ၊ခွင့်​လွှတ်​တယ်​ဆိုရင်​ ဒကာတို့ဟာ တကယ်​ကြီးမြတ်​တာပဲ"
​ပေတလူကို ​မြွေဆိုးကမကိုက်​လည်း ဒကာကြီးရဲ့​ဒေါသစိတ်​​ကြောင့်​ဖြစ်​တဲ့ ကာယကံ​မြောက်​ကျူးလွန်​မှုမှာပဲ
"တင်​ပါ့ဘုရား တပည့်​​တော်​လည်း အသိတရားရပါပြီ"
ကိုအုန်းထွန်းက ဆရာ​တော်​ကို ဝတ္ထု​ငွေကပ်​ခြင်း၊အ​အေးကပ်​ခြင်းတို့ပြုလုပ်​သည်။ ပြီးနောက်တွင် ဆရာ​တော်​လည်း ​ကျောင်းသို့ပြန်​လည်​ကြွသွား​သလို ကိုသောင်းလှတို့လင်မယားလည်းပြန်သွားသည်​။
ထို့နောက် ကိုအုန်းထွန်း၏သမီးဖြစ်​သူက ကြမ်းတိုက်​ဝတ်​ကိုယူကာ ဆရာ​တော်​ကြီးနှင့် ဧည့်သည်များတင်​ကျန်​ရစ်​​ခဲ့သော သစ်သားကြမ်းပြင်မှ ​ခြေရာများကိုတိုက်​မည်​အပြု၌...
"သမီး​ပေး ​ပေး အ​ဖေ့ကို​ပေး၊
ကိုအုန်းထွန်းက ကြမ်းတိုက်ဝတ်ကိုယူလိုက်သည်နှင့် ထိုဖြစ်အင်ကိုဒေါ်ခင်မြကြည့်ကာ ပြုံးရယ်၍သာနေတော့သည်။
ဖုန်း ။ 09 4312 4991
Posted by မင်းသီဟ (Min Thiha) at 11:52 AM
Labels: ဇာတိဖွားတို.၏ လက်ရာမွန်များ
စိတ်​မိုက်​တို့၏ ချုပ်ငြိမ်းရာ - ကိုနန္ဒ(ဝါးခယ်​မ)​...
ဦးစံမြင့် ( သို. ) ရုပ်ရှင်ထဲက ဗြိတိသျှ သခင် - ခ...
ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသော တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချု...
အမှတ်တရ မအူပင် GTI နေ့ စွဲများ ( ဒု ) - Nyi Nyi Ht...